Xog: Wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Abgaal oo hub aruursi kawada magaalada Gaalkacayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Xog: Wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Abgaal oo hub aruursi kawada magaalada Gaalkacayo * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xasan Shire wasiika maaliyadda Puntland ayaa sidoo kale raadinaya dhalinyaro uu hubeeyo
By Abdirisak M Tuuryare on 5th April 2021
Wasiirka Maaliyada ee Puntland oo ku sugan Gaalkacyo Sida uu sheegay u yimid howl shaqo waxaa uu ku dhexjiraa Arimo hub aruursi.
Xasan Shire intuu uu Wasiirka noqday wuxuu iibsaday hub aad u badan oo ka kooban:
labo 37 mm calibre anti-aircraft gun
15 DshK (Dashiike)
20 PKM gun
75 AK- 47 machine gun
Xog aruuris dhowaan la sameeyey oo ay ku jirto qalabka casriga ah ee noocyadiisa kala duwan waxaa lagu ogaaday Qaybta ugu badan hubkaas inuu yaal guriga Wasiirka. Marka waxaa isweydiin mudan yuu u hub aruursanayaa?
Intii uu Madaxweynaha ka ahaa Dawladda Puntland Saciid Cabdullahi Deni waxaa soo ifbaxaya dhaqan khilaafsan dawladnimada iyo hiigsi ku dhisan hufnaan. Waxaa dhowaan soo ifbaxay in labo qolo oo ku hardamaya maamulka Puntland ay isu hub aruursanayaan.
Koox Waa Aaranjaan, niman yaqaan hab dhaqanka Garowe, aqoon fiican u leh qabaailada dega Puntland laakiinse aan lahayn dhaqan dawladnimo, Xasan Shire Waa Wasiirka ugu mug weyn ee kooxda Aaranjaan.
Kooxda kale, Waa qoyska Saciid Cabdullahi Deni, oo ka kooban labaataneeyo qof, intooda badan Waa niman ku cusub dawladda iyo nidaamka Puntland. Badankoodu Waa Carab la dhaqan oo ku koray waddamada Khaliijka wax xiriir ah lama laha qabaailada dega Puntland. Kooxdaan Marka laga reebo madaxweynaha waxaa ugu tun weyn Xasan Cabdullahi Deni. Ninkaan asagu dhowaan buu bilaabay hub aruursi ka duwan kan walaalkiis ku aruursado magaca dawladda.
Ma garan karno labada koox cidda ay u hub aruursanayaan laakiinse haddii ay dhacdo in labada Xasan isqabtaan waxaa Garowe ka huleeli doona kan yar ee madaxweynaha la dhashay. Xasan shire Abgaal Waa nin dagaalo badan usoo joogay oo ku dhaawacmay ama lagu qabtay dagaal kasta oo Puntland ka dhacay, tusaale;
Dagaaladii Al-itaxaad Al islaami asagoo u dagaalamaya kooxdaas baa dhaawac lagu soo qabtay.
Dagaalkii Cabdullahi Yusuf iyo Jaamac Cali Jaamac Waa tii laga soo qabtay agagaarka Qardho.
Dagaalkii Cabdiraxmaan Faroole ku qaaday Baarlamaanka wakhtigii uu madaxweyne ahaa Cadde Muuse. Xasan Shire wuxuu ka mid ah maleeshiyaadkii Faroole isticmaalay waagaas.
Sida kor ka muuqata, talada aan siinayo kooxda Deni Waa; nimanyahow dhinaca hubka iska dhaafa oo qandaraasyadiina iyo mashaariicda ku ekaada Xasan shire Waa nin soo jabhadeeyey ee yaan lagu fududaan. Hadaad wax maqli weydaan Hadhow marka la isku arko Dubai- Al Ghurair wax kale yaan la idinka maqlin!
Xasan Abgaal oo odiyaasha kala hadlaya dhalinyaro uu hubeeyo